SHINee, EXO နဲ့ NCT က မန်ဘာတွေနဲ့ Boy Group အသစ် ဖွဲ့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာတဲ့ SM Entertainment – For her myanmar
Posted on August 2, 2019 Author Wathun	Comment(0)
ဟဲ့..ဟဲ့… အကုန်လုံး ကိုယ့် Bias တွေချည်းပဲဟ.. လမ်းပျောက်ရပြန်ဦးမှာလား SM?
ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကျော် SM Entertainment ကနေ ဒီနေ့ အရမ်းကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခု ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ Entertainment က နာမည်ကျော် Boy Band တွေက မန်ဘာတွေကို စုပေါင်းပြီး နောက်ထပ် Group တစ်ခု ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပါပဲ။ ဒီသတင်းကို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ SM က တရားဝင်ကြေညာမယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
ဒီ Group ထဲမှာ ပါဝင်မယ့်သူတွေကတော့ EXO ရဲ့ Kai နဲ့ Baekhyun, SHINee ရဲ့ Taemin, NCT ရဲ့ Taeyong နဲ့ Mark, WayV ရဲ့ Lucas နဲ့ Ten တို့ဖြစ်ပြီး သူတို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ Super boy groupကို ၂၀၁၉ အတွင်း Debut လုပ်မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီ Group ဟာ Unit Group လည်း မဟုတ်သလို Project Group လည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Project တစ်ခု၊ ပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက် ဖွဲ့စည်းလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တကယ့် Group အဖြစ် ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီး Debut ပြီးတဲ့နောက်မှာ Activity တွေ၊ Comebackတွေလည်း ထပ်ရှိသွားမှာပါတဲ့။
မေးစရာရှိတာက ဒီလို အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့လိုက်တော့ သူတို့ မူရင်း Group ကနေ သူတို့က ထွက်ရမှာလား ဆိုပြန်တော့လည်း မဟုတ်သေးပြန်ဘူးတဲ့ ယောင်းတို့ရေ… ဒီအဖွဲ့သစ် ဖွဲ့လိုက်ခြင်းဟာ မူရင်းအဖွဲ့တွေအပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိဘဲ မူရင်းအဖွဲ့တွေကလည်း ရှိမြဲတိုင်း၊ နေမြဲတိုင်း ဆက်ရှိနေဦးမှာပဲလို့ ဆိုပါတယ်။
ကဲ… ယောင်းတို့ရော ဘယ်လိုထင်ကြလဲ?
References : Soompi, All Kpop
ဟဲ့..ဟဲ့… အကုနျလုံး ကိုယျ့ Bias တှခေညျြးပဲဟ.. လမျးပြောကျရပွနျဦးမှာလား SM?
ကိုရီးယားရဲ့ နာမညျကြျော SM Entertainment ကနေ ဒီနေ့ အရမျးကို အံ့သွစရာကောငျးတဲ့ သတငျးတဈခု ထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတော့ သူ့ Entertainment က နာမညျကြျော Boy Band တှကေ မနျဘာတှကေို စုပေါငျးပွီး နောကျထပျ Group တဈခု ဖှဲ့မယျဆိုတဲ့ သတငျးပါပဲ။ ဒီသတငျးကို သွဂုတျလ ၈ ရကျနမှေ့ာ SM က တရားဝငျကွညောမယျလို့လညျး ဆိုကွပါတယျ။
ဒီ Group ထဲမှာ ပါဝငျမယျ့သူတှကေတော့ EXO ရဲ့ Kai နဲ့ Baekhyun, SHINee ရဲ့ Taemin, NCT ရဲ့ Taeyong နဲ့ Mark, WayV ရဲ့ Lucas နဲ့ Ten တို့ဖွဈပွီး သူတို့အားလုံးပါဝငျတဲ့ Super boy groupကို ၂၀၁၉ အတှငျး Debut လုပျမယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီ Group ဟာ Unit Group လညျး မဟုတျသလို Project Group လညျး မဟုတျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆိုလိုတာက Project တဈခု၊ ပရိုဂရမျတဈခုအတှကျ ဖှဲ့စညျးလိုကျတာမြိုး မဟုတျဘဲ တကယျ့ Group အဖွဈ ရပျတညျသှားမှာဖွဈပွီး Debut ပွီးတဲ့နောကျမှာ Activity တှေ၊ Comebackတှလေညျး ထပျရှိသှားမှာပါတဲ့။
မေးစရာရှိတာက ဒီလို အဖှဲ့သဈ ဖှဲ့လိုကျတော့ သူတို့ မူရငျး Group ကနေ သူတို့က ထှကျရမှာလား ဆိုပွနျတော့လညျး မဟုတျသေးပွနျဘူးတဲ့ ယောငျးတို့ရေ… ဒီအဖှဲ့သဈ ဖှဲ့လိုကျခွငျးဟာ မူရငျးအဖှဲ့တှအေပျေါ သကျရောကျမှု မရှိဘဲ မူရငျးအဖှဲ့တှကေလညျး ရှိမွဲတိုငျး၊ နမွေဲတိုငျး ဆကျရှိနဦေးမှာပဲလို့ ဆိုပါတယျ။
ကဲ… ယောငျးတို့ရော ဘယျလိုထငျကွလဲ?
Tagged Boy Band, Celebrity news, Exo, Members, NCT, Rumoured, Shinee, SM, WayV
Celebrity News Women News
ပါကစ္စတန်မှာ #metoo လှုပ်ရှားမှု စတင်လာခဲ့
Posted on April 21, 2018 July 25, 2018 Author Aye Mon Kyaw
ဘယ်သူကများ ပါကစ္စတန်လိုနိုင်ငံမှာ စတင်ရဲခဲ့တာလဲ
၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အချောဆုံး အမျိုးသားဆယ်ဦး
Posted on April 3, 2018 Author Sugar Cane
ယောင်းတို့ သိတဲ့မင်းသားတွေများပါနေမလားလို့.. 😉
Posted on January 28, 2019 January 28, 2019 Author Sugar Cane
ကိုယ့်အသည်းလေးတွေ ထိပ်ဆုံးကပဲ.. <3